Nabad sugidda oo soo bandhigtay wiil lagu sheegay weriye Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Hay’adda nabad Sugida Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kusoo bandhigtay wiil dhallinyaro ah oo ay sheegtay inuu ka tirsanaa weriyaasha la shaqeeya Alshabaab.
Wiilka lasoo bandhigay oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Qaasim Axmed ayay nabadsugiddu sheegtay inuu ka shaqeyn jiray Idaacadda Al-andalus ee Alshabaab iyo Mus’asada Kataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Alshabaab.
Waxey sheegtay Nabasugiddu in Maxamed Qaasim Axmed isiintii la soo dhaafay laga qabtay maqaaxi ku taala degamda Dharkeynleey ee magaalada Muqdisho.
Hay’adda Nabad sugida, taliskeeda Gobolka Benaadir ayaa wiilkan ku tuhunsan inuu ka qeyb galay dilal loo geystay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo tiradoodu gaaraysay labo xildhibaan, kuwaasi oo siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka Xamarweyne iyo Dharkeynleey.
Wiilkan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa yiri “Magaceeygu waa Maxamed Qaasim Axmed, 2009 ilaa iyo 2010-kii waxaan ka shaqeynayay Idaacadda Afka Shababaabka ku hadasha Al-andalus, qeybteedka Kismaayo, waxaan ka tegay 2011-ka waxaana ku biiray mu’saso Al-kataa’ib la dhaho oo ay Shabaabku leeyihiin”.
Wiilkaan waxaa lala qabtay wiil kale oo magaciisa lagu sheegay Farxaan Macaallin, kaasoo hay’adda Nabad sugiddu sheegtay inuu ka booday qaarigii lagu soo qaaday markii la xiray, sidaasna uu ku dhintay.
Ehellada Farxaan Macallin ayaa shalay hay’adda nabadsugidda Soomaaliya ku eedeeyey iney ka qabteen degmada Dharkeynley kadibna ay toogteen.
Idaacadda Alshabaab ee Al-andalus ayaa beenisay in wiilka la soo bandhigay iyo kan dhibtay labada ay kazoo shaqeeyeen Idaacadaas, waxaana Al-andalus war arrintaas lagu beeninayo soo dhigtay bogga ay ku leedahay Facbook.
Shir looga hadlayo horumarrinta Puntland oo lagu qabtay Garowe